A na -emepụta ahịhịa ahịhịa ahịhịa site na ụkpụrụ bionics, ahịhịa nke omnidirectional, hardness, larịị, na -enweghị concave na convex, ọnụọgụ nchekwa dị elu, na -akwado asọmpi asọmpi, ka ndị ọrụ ghara inwe nnukwu ọdịiche na ọrụ na ahịhịa eke, mgbanwe dị mma, ụkwụ na -enwe ahụ iru ala. Ahịhịa wuru ụlọ agafeela nnwale nnwale UV na ụlọ ọrụ ahịhịa. Enwere ike iji ahịhịa na -emepụta ihe na ihu igwe niile, uru na -adị mgbe niile, nchekwa gburugburu. Iwu anyị ...
PP Graphic Plank nwere PVC Back-Rainbow gbakwunyere
1. Ezubere mkpokọta Rainbow Plus maka ndị na-emepụta ejiji na ndị na-eri ihe, site n'enyemaka nke nha plank na agba na-enweghị atụ. RP01 bụ iberibe isi awọ anọ ka ọ bụrụ ntọala nke usoro ahụ zuru oke, ebe RP02-RPR08 bụ iberibe agba anọ na-enweghị atụ. Ngwakọta ha na -akwụghị ụgwọ ga -eme ka ime ụlọ gị bụrụ nke na -enweghị njedebe n'ụdị dị iche iche. 2.Ogo ngwaahịa anyị na -erekarị na nchịkọta a bụ 1000m2 kwa agba. Nkọwapụta ngwaahịa kapeeti taịl ...
Akpụkpọ anụ Cowhide
Anyị na -ahọrọ akpụkpọ anụ ehi dị elu maka akwa mkpuchi akpụkpọ ụkwụ anyị. Eriri raara onwe ya nye na ọmarịcha mkpuchi ejiri aka mee ga -ahụ na ọ ga -adịte aka. Ụkpụrụ dị iche iche na agba na -enwu gbaa nwere ike chọọ ụlọ gị mma nke ọma yana gosipụta ụtọ ịchọ mma anyị.
Kedu ihe bụ sisal? Sisal bụ eriri eke sitere na ogologo akwụkwọ nke Agact Sisalana cactus plant. N'ịbụ nke tolitere na mpaghara kpọrọ nkụ, eriri siri ike nke sisal dị mma maka ọtụtụ ngwaahịa yi uwe siri ike dị ka twine, ụdọ na akwa. Sisal na -agbanwe agbanwe nke ukwuu yana na -adịte aka, na -enyere anyị aka imepụta akwa na akwa kapeeti n'ụdị na ụdị dị iche iche. Kedu ihe kpatara ịhọrọ sisal? Eriri sisal siri ike ga -ebili nke ọma na mpaghara okporo ụzọ dị elu dị ka ime ụlọ, ime ụlọ, ndị ọrụ ...
1. Nchịkọta Doha bụ nke na-abụghị nke otu maka ọmịiko oru ngo.
2. Moq bụ 300m2 kwa agba na oge nnyefe bụ ụbọchị 20.
Kapeeti ebipụtara bụ nhọrọ kacha dabara adaba, nke na -echebara ma atụmatụ mara mma ma ọnụ ahịa ya echiche. Isi uru nke ngwaahịa a bụ mmefu ego nke dị ọnụ ala yana ọ na -eme ngwa ngwa.
Nylon Colorpoint-Airway & Oké Osimiri
1. Nchịkọta Seaway & Airway bụ nke na-abụghị nke otu maka obi ọmịiko.
1. Nchịkọta Apple X bụ nke na-abụghị nke ngwaahịa maka ịdị nro oru ngo.
1. Nchịkọta Dunkirk bụ nke na-abụghị nke otu maka obi ọmịiko.
1. Nchịkọta Ịtali bụ nke na-abụghị nke otu maka ọmịiko oru ngo.
1. Nchịkọta London bụ nke na-abụghị nke otu maka ọmịiko oru ngo.